Abahlinzeki be-Sachet Tomato ne-Factory - China Abakhiqizi be-Sachet Tomato
INKANYEZI Brand 50g Sachet
"Okusetshenziswayo okuhle kakhulu ukwenza ukunambitheka okuhle kakhulu!" Sinesilawuli sekhwalithi ephezulu kudwendwe lwendalo futhi sinikela ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala kumakhasimende ngosizo oluqinile lobuchwepheshe. Sifisa ukunweba izimakethe eziningi nabangane emhlabeni ukudala ikusasa eliqhakazile ngesisekelo senzuzo yomunye nomunye. Ngaphezu kokunamathiselwe kukatamatisi osethinini, singakunika futhi i-sachet utamatisi unamathisele, unamathisela wethu katamatisi une-Flat Sachet ne-Standup Sachet. Ngosayizi abahlukahlukene, singenza 50g 56g 70g 100g njll ...
70g Sachet Utamatisi Namathisela (Flat Bag)